Shirwayanha doorashada xiriirka Soomaaliyeed ee Dabaasha oo Muqdisho ka dhacay+Sawirro
Thursday, January 24th, 2019 - 09:02:56
Sunday December 03, 2017 - 22:53:49 in Wararka by Hussein Hadafow
Xiriirka Soomaaliyeed ee Dabaasha ayaa maanta magaalada Muqdisho ku qabtay shirwaynaha doorashada xirirkaas , waxaana lagu doortay hogaanka afarta sano ee soo socota xiriirka yeelanayo.
Shirwayanaha oo ka dhacay magaalada Muqisho waxaa kasoo qeyb galay Masuuliyiin ka socotay Wasaaradda dhallinyarada iyo Isboortiga, guddiga Olombikada Soomaaliyeed, Naadiyada Xiriirka Dabaasha, musharaxaiinta xilalka u tagnaa iyo Marti sharaf kale.
Ibraahin Xuseen Cali Roombo oo ka socday Guddiga Olombikada Soomaaliyeed isla markaana ahaa guddoomiyaha guddiga doorashada ayaa sharaxaad dheer ka bixiyay taariikhda iyo muhiimada ay ciyaarta Dabaasha u leeedahay Soomaaliya, intaa kadib Cabdi Cabdulle Axmed (Baasaale) oo Guddiga Doorasha ka mid ahaa ayaa madasha ka aqriyey xubnaha ka socday Naadiyada codkooda dhiibanayey iyo masuuliyiinta u taagnaa doorarasha guddiga fullinta xiriirka Dabaasha , waxayna Naadiyada cod aqlabiyad leh Guddoomiyaha Xiriirka Soomaaliyeed ee Dabaasha 2017-2021 u doorteen Axmed Cabdi Xasan Wataac.
Sidoo kale waxaa Guddoomiye ku xugeenada xiriirka loo kala doortay Cali Axmed Abuukar 1-aad , Muxudiin Cabduqaadir Maxamed 2-aad iyo Maxamed Bashiir Cali 3-aad.
Xubanaha xiriirka waxaa loo doortay , Shamso Axmed Cali, Maslax Maxamed Maxamuud , Xamza Cali Xamza , Axmed Nuur Maxamed, iyo Cumar Cabdullaahi Maxamed
Xoghaynta ayaanan kujirin xubnaha la doortay waxaana soo magacaabi doona Guddoomiyaha la doortay ee xiriirka.
Gebogebadii waxaa halkaas ka hadlay Guddoomiyaha cusub ee xiriirka Soomaaliyeed ee Dabaasha Mudane Axmed Cabdi Xasan Wataac ,waxuuna yiri " Xxirirka Dabaasah waxuu ka mid yahay xiriirada guddiga Olombiakd Soomaaliyeed hoostaga basle aan sida joogtada u shaqeyn waxaana Aniga iyo xubanaha guddiga fullinta loo doortay dooneynaa in aan xiriirka ka dhigno mid shaqeeya lana tartama xiriirada kale ee dalka kajira kana soo muuqda tartamada heerka caalami.”
Guddoomiye Wataac ayaa dhanka kale mahad celin ballaaran usoo jeediyey naadiyada sida kalsoonida kujirto codkooda usiiyay waxuuna ballaan qaaday in waxqabad muuqda ay la imaan doonaan.
Xiriirka Soomaaliyeed ee Dabaasha ayaa ka mid ahaa xiriirada bandhigga wanaagsan ku lahaa ciyaaraha ee caalami , Soomaaliyana guulo usoo hoyey waxaana hogaanka cusub ee loo doortay laga rajeynayaa in ay dib usoo nooleeyaan guulihii taariihiga uu xiriirkaas ku caan baxay.
Sawir Qaade: Osman Haggi